5 Ọnyà nke Social Media — njem Lee - Official Site
Ọbịa post site Jessica Barefield
Ka m na-amalite site n'inye a disclaimer. Isiokwu a bụ banyere otú ihe ọjọọ mmadụ mgbasa ozi bụ. Ke ufat, na na nri obi postcho, ọ pụrụ ịbụ ihe dị ebube. N'ókè nke isiokwu a bụ tụọ ụzọ ụfọdụ mmadụ mgbasa ozi nwere ike ịbụ ụdị ọnyà a matara na Christian ndụ na-agba gị ume inyocha obi gị mgbe ọ na-abịa gị na-elekọta mmadụ media oriri na ikere òkè. Ndị a bụ ụzọ ise na mmadụ mgbasa ozi nwere ike na-eri nri anyị ọchịchọ mmehie.
1. Social media nwere ike oge gị n'iyi
Nke a bụ ihe ọ bụla anyị na-anụghị tupu, ma ọ bụ ọnụ ahịa na-ekwughachi. Echetara ayi na Ndị Efesọs 5:16-17 na na ụbọchị ndị ọjọọ na anyị kwesịrị ime ka ndị kasị mma jiri oge e nyere anyị. Tụlee maka oge ihe i nwere ike ime kama ịlele niile saịtị ndị ahụ. Nọ na-echere na otu oge atọrọ, anyị nwere ike na-a ndepụta nke ndị mmadụ ikpe ekpere maka na anyị na ekwentị na-eji ndị na mmezi nkeji ekpere maka ezinụlọ anyị na ndị enyi. N'ezie, na otu oge ma ọ bụ ọzọ, anyị nile bụ ikpe mara nke okodu awa na Facebook na a ụbọchị na mgbe ahụ meghee Okwu Chineke. Ebe ọ bụ na ọ bụla oge bụ onyinye si n'aka Jehova, ọ bụ ọnụ ahịa-ajụ onwe gị, "È nwere ihe ọzọ bara uru na m nwere ike na-emefu oge m na?"Ọtụtụ n'ime oge, Azịza ya bụ ma eleghị anya ee.
2. Social media-enye a n'elu ikpo okwu gị echiche ọ bụla
M na-eche na ịdị n'otu nke ikenye na mmadụ mgbasa ozi nwere ike duhie gị iche na ọ bụ OK biputere dị nnọọ banyere ihe ọ bụla. anyị na-ekwu, anyị anonymously kụọ ndị, anyị akparị ndị nọ n'isi, na anyị na-ekwu ihe ọ bụla anyị na-eche banyere siri, dị ka ma ọ bụrụ na ha abụghị ezigbo ndị. Ma ayi kwere na anyị na-adịghị n'ezie ga-aza ajụjụ maka nke ọ bụla. Unu ga-ghọgburu site nzuzo nke gị ụlọ ugbu a-a ga-enwe ihe ọ bụla na nzuzo mgbe anyị na-eguzo n'ihu Chineke dị ndụ ma na-aza ajụjụ maka okwu anyị. Matthew adọ aka ná ntị anyị mara n'ụzọ doro, "On ụbọchị nke ikpe, ndị mmadụ ga-enye akaụntụ nke ọ bụla akpachapụghị okwu ha na-ekwu. "Ka anyị cheta ihe a n'ido aka na nti, oge ọzọ anyị imelite ọnọdụ anyị.
3. Social media pụrụ ịkpalite discontentment
Mgbe anyị na-anọ ogologo oge agbapụtara ihe ndị ọzọ na-eme, na-asị, ọ adọrọ uche anyị gaa na ihe niile anyị na-enweghị ma ọ bụ na-efu si na. Ọ nwere ike ime ka anyị ịjụ ihe mere ndụ anyị adịghị ele anya otu. Kedu ihe m na-eche nke na quote? M chọrọ ka m nwere ya echiche nke style. Ha ụlọ ọhụrụ bụ ụzọ ibu karịa nke anyị! Ọ bụrụ na anyị akpacharaghị anya, nkeji iri atọ on Facebook ma ọ bụ Pinterest nwere ike ahapụ gị mmetụta na-adịghị emepụta, -amaghị mma, na underwhelmed na gị onwe gị ndụ. Ndị Hibru agba anyị ume,, "Mee ndụ gị free si ịhụ ego n'anya, na-enwe afọ ojuju n'ihe mmadụ nwere, N'ihi na ọ sịwo, 'M gaghị ahapụ gị maọbụ gbahapụ gị.' "Anyị nwere ike n'ikpeazụ enwe afọ ojuju n'ihe ndụ anyị dị ka ndị kwere ekwe n'ihi na e nyere anyị anyị mkpa anyị niile na Christ. Jụọ onwe gị ma gị na ojiji nke mmadụ mgbasa ozi na-enyere gị kwere nke a n'eziokwu.
4. Social media pụrụ ịkpalite nganga na-ị n'ime lekwasịrị anya
Social media nwere ike ngwa ngwa, ibu nke aka anyị ikpo okwu maka onwe ya n'ọkwá. Anyị kwesịrị ịjụ onwe anyị ihe anyị na-akpali n'ezie bụ maka ikenye ihe anyị na-eme. Ọ bụ na anyị na-achọ ọmịiko ma ọ bụ otuto? Anyị adịghị achọ-ọma chere na nke ma ọ bụ na-etu ọnụ banyere fun ihe anyị na a na-eme? Ị na mgbe niile elele ole "amasị" ma ọ bụ "retweets" gị post nwetara? All n'ime ihe ndị a-eme ka nganga na-anyị lekwasịrị anya onwe anyị. Nke a pụrụ ịbụ a ezigbo ike ọnyà a matara onye ọ bụla nwere a n'elu ikpo okwu na ọ bụghị naanị ha ndị enyi na ezinụlọ. Ma ị na-eme music ma ọ bụ nwere a na-ewu ewu blog, naanị n'ihi na ọtụtụ puku ndị mmadụ na-ege ntị apụtaghị ihe niile na-echeta bụ uru na-ekwu. Anyị aghaghị icheta na retweets, comments, na-amasị na-adịghị na-akpaghị aka nye legitimacy ka ihe anyị biputere. Chineke na-ahụ nkwali nke obi anyị na mgbe ghọgburu site a mma-deere post. Ka m na Samuel 2:3 adọ aka ná ntị, "Unu na-ekwu okwu otú nganga ma ọ bụ ka ọnụ gị na-ekwu okwu ndị dị otú ahụ dị mpako, n'ihi na Jehova bụ Chineke nke maara na site Ya omume na-anyịgbu. "
5. Social media pụrụ imerụ echiche anyị nke mmekọrịta
N'ihi na ọ bụla na-erite uru na-elekọta mmadụ media nwere maka mmekọrịta, e nwere a drawback. Ọ dị mfe ịnọgide na-eto ị hụrụ n'anya (ma eleghị anya, nnọọ mfe?). Ị ka nwere miri, nwee ezi mkparịta ụka na onye? Ọ dị mfe iji na-na a ọtụtụ ndị na ị hụrụ n'anya-na a ọtụtụ ndị ị na-adịghị ọbụna mara (ma eleghị anya, ọtụtụ?). Ị na oversaturated na nkọwa nke 300 ndụ ndị mmadụ na ị na-agaghị eme ezigbo ọrụ nke na-ahụ n'anya na- 10 ndị ị na-ahụ n'izu na-izu? Anyị nwere ike ngwa ngwa ịzụ onwe anyị ịdị na-eji ọkụ nke ọmụma kama ndị hụrụ ndị mmadụ. Ịmara banyere onye dịrị ndụ na-ekere òkè nile banyere ndụ nke gị via mmadụ mgbasa ozi abụghị otu dị ka ndị ezigbo enyi. N'ezie Jizọs bụ ihe nlereanya zuru okè nke ihe ọ pụtara ịbụ ezigbo enyi. Dị ka Jizọs na-akụzi, "My iwu bụ nke a: N'anya onye ọ bụla ọzọ dị ka m hụrụ unu n'anya. Greater ịhụnanya nwere na ọ dịghị onye karịa nke a, ka mmadụ tọgbọ ndụ ya n'ihi ndị enyi ya. "Enyi bụ karịa nchikota nke mmelite ọkwa ma foto. Enyi bụ àjà. Ọ na-agba onye ọ bụla ọzọ n'ịbụ arọ. Ọ bụghị naanị virtual-ọ ga-abụ tangible.
Jessica Barefield bi na Washington D.C. ya na di Njem, na nwa ha Q. Ị pụrụ ịgụ site na ya na ya blog, -Amasị n'anya.
Xavier • September 24, 2013 na 12:18 pm • zaghachi
Nke a bụ nnọọ eziokwu. M ga-n'ihu ọha na-ekweta na m na-ala n'iyi awa na awa nke oge m na ụbọchị na-elekọta mmadụ media na niile ihe wetakwaara, M nwere ike na-emetụta. M maara na m n'uche na n'obi nke na m chọrọ na-enwe bee ya, ma ọ bụ nke ukwuu na-ebelata ya, ma ọ dịghị mfe. Ma ozi ị ekekpepde na okwu Chineke na ị na-eji na Ntụle a-agwa m okwu n'ụzọ doro anya. Daalụ maka isiokwu a :)
Ashley • September 24, 2013 na 12:19 pm • zaghachi
Great post! Mere n'ezie ka m na-eche ma tụlee m na-elekọta mmadụ media ojiji!
Tyron • September 24, 2013 na 12:21 pm • zaghachi
Dị nnọọ mma na-agụ! Ọ dịghị mgbe aka na-elekọta mmadụ netwọk ruo mgbe a obere ihe karịrị otu afọ gara aga na a bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị mere na. M n'ezie e na-eche echiche banyere ihichapụ m mmadụ netwọk na-elekwasị anya ihe kwesịrị ka a lekwasịrị anya. Lot nke ọma ihe ebe a. Daalụ maka ewere gị oge dee ya ma na-eso.
Daniela • September 24, 2013 na 12:27 pm • zaghachi
Chaị! Bụ eziokwu. M maa kwesịrị ịrụ ọrụ na m na-elekọta mmadụ media oriri. Ọ na-ukwuu na-ewe otu nke ezigbo ihe mere na m kwụsịrị na-na Pinterest. Daalụ maka na-ekere òkè.
Jay • September 24, 2013 na 12:51 pm • zaghachi
Ọ dịghị ihe na-adịghị nke gọziri agọzi
Stacey • September 24, 2013 na 12:57 pm • zaghachi
Ekele gị nke ukwuu maka ikenye a. M na a na-alụ ọgụ na onwe m banyere ihe na-na Facebook. Yiri n'oge na-adịbeghị niile ọ na-eme bụ ime ka ara iwe. Nke a bụ na ihe niile m mkpa ịnụ na ga gụgharịa mgbe m mkpa ka e chetara. Daalụ na Njem. Chukwu gozie.
Mishael • September 24, 2013 na 1:20 pm • zaghachi
Eulaivi Clutario • September 24, 2013 na 1:30 pm • zaghachi
Ị bụ onye mmụọ nsọ! N'ihi ya, ọtụtụ ihe ọma ihe i nwere ebe a. Toonụ Chineke maka amamihe gị na nke ahụ bụ ihe kwere nghọta na nnọọ mkpa ka anyị na ọgbọ! :)
ee • September 24, 2013 na 1:48 pm • zaghachi
M na a na-ebipụ ka obi site a dị ike nkekọrịta. M kwere na anyị na-niile hụrụ chọrọ a na mpaghara. Ekele Njem na Jessica. Ka Chineke nọgide na-eji gị .
Caleb • September 24, 2013 na 2:15 pm • zaghachi
ọma we! M na nwere ụfọdụ n'ime ndị a otu echiche banyere mmadụ mgbasa ozi na n'oge gara aga ego afọ. Nọgidenụ na-ede ihe!
ụzọ • September 24, 2013 na 4:56 pm • zaghachi
ahụrụ m nke a n'anya!!!! Ya mere bụ eziokwu na m na-achọ ndị ọzọ ndị mmadụ ghọtara isi ihe ndị a!
Themba • September 25, 2013 na 5:49 Abụ • zaghachi
ị na n'ezie n'ike mmụọ nsọ na ọgbọ a. ọma we!!!
Clara • September 26, 2013 na 4:27 Abụ • zaghachi
Daalụ nke ukwuu Jessica n'ihi na ndị a okwu na-nnọọ eziokwu na nkwenye siri ike nyere. Ka Chineke nọgide na-eji gị na ị ezinụlọ :-)
Angela • September 26, 2013 na 5:27 pm • zaghachi
Daalụ maka a-enye ihe ọmụma post! Nke a kwesịrị ime ka anyị idozi anyị anya na Jizọs ma na-erughị na ndị ọzọ ma na onwe.
James • September 26, 2013 na 5:27 pm • zaghachi
Awesome…. Otuto diri Chineke naanị….
Mark • September 26, 2013 na 5:36 pm • zaghachi
Daalụ nke ukwuu, maka “nta ndị mmadụ” na si a olu ya na-ekwu okwu ọnụ ọgụgụ na-eche anyị “na-elekọta mmadụ” uru na-ewepụtara na-elekọta mmadụ media. Daalụ maka edemede oku !
Jimmy McCrary • September 26, 2013 na 5:38 pm • zaghachi
M mkpa a!!
Oyishoma Emmanuel • September 26, 2013 na 5:40 pm • zaghachi
Nke ahụ bụ nnọọ eziokwu. Anyị na-ala n'iyi dị oké ọnụ ahịa oge na-elekọta mmadụ na netwọk na-enweghị nzube, na mgbe ọ bụla nzube bụghị na ala, ókè bụ-apụghị izere ezere. Mụ onwe m na na ikpe mara nke a mgbe ụfọdụ; ma i ikpe ekpere maka amara ébé m na-ebute ụzọ.
Adin Moore • September 26, 2013 na 5:44 pm • zaghachi
Nke a bụ a n'ezie ezi post. Daalụ maka na-ekere òkè ya anyị, ụtọ na-agụ ya na ọ na-emeghe anya m na ọnyà nke na-elekọta mmadụ media. :) Grace & Peace.
Joseph • September 26, 2013 na 6:03 pm • zaghachi
Kpọmkwem ihe mere m ji na-adịgide adịgide ehichapụ m Fakebook na n'oge 2012. Dị nnọọ ka otú m nyere cable TV na 2001, M adịghị uche ma Fakebook ma ọ bụ TV. FB na-eme ka ọ dị mfe ịhụ onwe gị n'anya, nke bụ ikpere arụsị. N'ịbụ na kọmputa ọrụ (video edezi) bụ ihe ọzọ ihe mere m ji na-adịghị chọrọ na-eji oge na ya na m free oge, ma ọ dị nnọọ mfe imefusị oge na kọmputa. Ọ bụrụ na m na na na YouTube, ọ bụ na-ekiri iwuli videos si Ndị Kraịst ndị ọzọ. M ukwuu nwere ike ikwu Kraịst ọ bụla na-agụ isiokwu a: “Akpụ anyị Mkpụrụ Obi na Facebook” site Shane Hipps (Nke abụọ Nature Journal ntụpọ com)
Leticia • September 26, 2013 na 6:25 pm • zaghachi
Nnọọ chere akpali iche!
dịkwa mma • September 26, 2013 na 6:41 pm • zaghachi
Chaị, oké post, M n'ezie gọziri agọzi.
Barbara • September 26, 2013 na 6:56 pm • zaghachi
OMG m nnọọ ikpe urua kpọmkwem ihe i kwuru …ọtụtụ awa na facebook na a ga-okodu na okwu! M hụrụ n'anya nke a blog…na-na ihe ọmụma na-abịa!
Priscilla • September 26, 2013 na 6:58 pm • zaghachi
Na-amasị m gị ziri ezi ọnọdụ; kpam kpam ikpe na-elekọta mmadụ media, ma na-akọwa okwu / ọchịchọ maka mmehie. Na-echetara m iLove.
Rochelle • September 26, 2013 na 7:05 pm • zaghachi
Good points..thanks maka nkekọrịta m mkpa ọ .
Christine • September 26, 2013 na 8:16 pm • zaghachi
Daalụ maka na-ekere òkè! Ezigbo ihe ncheta nke otú anyị kwesịrị adọ aka ná ntị onwe anyị mgbe ọ na-abịa na-elekọta mmadụ media.
Susan • September 26, 2013 na 8:29 pm • zaghachi
Daalụ Jessica maka isiokwu a & na-ekele gị njem maka ikenye na fb otú m nwere ike ịhụ ya & abịa na blog na-agụ ya.
Liz • September 26, 2013 na 8:41 pm • zaghachi
Great dee elu! Chere akpali iche n'ihi na n'aka…mara onwe!
Christa • September 26, 2013 na 8:56 pm • zaghachi
Chaị! Nke a bụ ihe ịtụnanya! Kwa mgbe kụrụ m na m n'ezie mkpa ịnụ ya. Daalụ nke ukwuu. Chukwu gozie!
pink • September 26, 2013 na 9:23 pm • zaghachi
Ekele gị nke ukwuu maka-ede nke a. Ọ bụ nnọọ ihe mmụta na enyerela m ọtụtụ na-amata na m mkpa amachi m oge na-elekọta mmadụ media. Ọtụtụ n'ime ihe ndị ị na-na na kọwara na ihe niile m nwere ike ikwu na. Okodu oge dị ukwuu na-elekọta mmadụ media bụghị uru maka mmụọ m gị blog n'ezie etinye ya na okwu m. Ọzọ daalụ nke ukwuu
Laurie • September 26, 2013 na 10:41 pm • zaghachi
Ịnọ na na nọmba 4 maka m. Otu na-ekiri – ekele
aganụ • September 26, 2013 na 11:09 pm • zaghachi
Daalụ maka na-ede isiokwu a; isiokwu a bụ iwuli.
Clement Magombo • September 27, 2013 na 2:25 Abụ • zaghachi
Chineke na-agọzi gị n'ihi na-ekere òkè nke a. M mkpa ịdị ọcha ma echiche na ihe ọ bụla m na-eme online / offline. Grace na udo
SITE • September 27, 2013 na 3:31 Abụ • zaghachi
Awesome isiokwu! Ọfọn articulated na echiche ziri ezi. Daalụ maka nkekọrịta
Elton • September 27, 2013 na 6:18 Abụ • zaghachi
Ikpe ka ebubo na niile 5 ihe…Daalụ maka nke a.
Adam • September 27, 2013 na 7:35 Abụ • zaghachi
Isiokwu a na-na-ejide m anya ngwa ngwa n'ihi na ọrụ m bụ online na a nnukwu akụkụ nke ọ bụ na-elekọta mmadụ media. Tupu nke a bụ ọrụ m na m nwere ike kpamkpam iko a. Ọ pụrụ n'ezie ịbụ a na-egbu oge ma ọ bụrụ na ọ dịghị onwe akara. Ọ ga-abụ ihe bịakwutere na ịkpachara anya n'ihi na n'aka!
Nisha • September 27, 2013 na 9:32 Abụ • zaghachi
M hụrụ nke a njikọ na m Facebook na e dreading na-agụ ya n'ihi na m maara na ọ ga-ikpe m na taa m kwuru, “Ọ dị mma… Ka m nwere ya.” akpa ọchị. Dị nnọọ banyere ihe niile dị n'ebe a bụ eziokwu banyere otú m na-eji oge m online na m ga-ewere ya na onye dere isiokwu a gaghị gwa a ma ọ bụrụ na ọ na-adọga a onwe ya n'ụzọ ụfọdụ. N'ihi ya, ọ dị mma ịmara na e nwere ndị ọzọ na-ebu ka ọ bụ ndị na-ebu otu ihe ahụ ibu arọ. Na chọọchị ị na-eche dị ka ị na-ekwesịghị ikwere na stof dị ka nke a, n'ihi na anyị na-kere echiche na ọ dịghị onye ọzọ uu ya. Dị nnọọ ndị ọzọ ụbọchị m na-agwa okwu na di m na-agwa ya otú m ehichapụ ụfọdụ ngwa ọdịnala na m iPod (ee m ka nwere ihe iPod na bụghị onye na iphone, site nhọrọ) n'ihi na ọ na-kere adịghị mma /-adịghị asọpụrụ Chineke echiche. M na-eji na-egwu Home Design ebe ị nwere ike ịmepụta gị nrọ n'ụlọ na n'aka m ga-aghọ nnọọ mbà n'obi na ụlọ anyị na-ebi. M ka na-n'anya na-egwu na-akpọ Mall World on FB na kwuputa di m na-amasị m ya n'ihi na m avatar bụ onye m na-, ọ bụ mma, taa, independant na ọ bụ fantasy na m ụtọ bi site na. Ma eleghị anya, m uda weird ma ọ bụ ndị mmadụ nwere ike iche na m na-akọrọ ukwuu ma nke a bụ m nkwenye. Daalụ maka nwee ume ihe m ma site na-ekere òkè gị onwe gị na nkwenye anyị edemede na ndị ọzọ commenters.
ChinaJohnson • September 27, 2013 na 11:44 Abụ • zaghachi
M ga-ihichapụ m Facebook na Instagram maka a mgbe. Nke a bụ m edemede oku. My di e na-agwa m banyere ihe a na discontentment arahụ tere! Daalụ Jessica!
Aaron • September 27, 2013 na 1:04 pm • zaghachi
akpa ọchị nke a bụ nnọọ eziokwu.. dabara nke ọma, m na-ewepụ m na-elekọta mmadụ ịkparịta ụka n'Ịntanet akaụntụ banyere 3 afọ ndị gara aga :D
Richard • September 27, 2013 na 1:46 pm • zaghachi
Joshua • September 27, 2013 na 9:59 pm • zaghachi
Nke ahụ bụ n'ezie! Nwetara m thinkin!
RJ • September 30, 2013 na 6:21 Abụ • zaghachi
Daalụ! M na-etinyecha na-izu ogologo okpukpu si Facebook, email, na Instagram na-arụ ọrụ na mmekọrịta ndị m na ndị m na-ahụ na m kwa ụbọchị ndụ.
Tyler • September 30, 2013 na 7:21 Abụ • zaghachi
Fantastic stof! M a akwụkwọ sekọndrị na akụkụ banyere etinye ukwuu ngwaahịa n'ime retweets na-amasị bụ nnọọ eziokwu! M maa eche ha bụ ụfọdụ ihe ndị nwere ike si na Twitter / Facebook ma ọ bụ ihe niile banyere ebe ị obi bụ!
aha: Daily Akụ | ndima Christ
THOMASSINGWA • October 3, 2013 na 12:51 Abụ • zaghachi
Chaị ekele Chineke na e dere m,nwere ike ndụ na-enye n'anya mgbe niile-agọzi gị, gị family.Trip abụwo mgbe nile onye nke ụbọchị The music,writtens etc-eme ka m awake.we-ekele Chineke maka gị
Sunshine • October 3, 2013 na 11:17 pm • zaghachi
Facebook free Fridays?! Jikọọ m! :P dum ọnwa nke October!
aha: N'ihi na Ịhụnanya nke Lupe
Miranda • October 8, 2013 na 1:38 Abụ • zaghachi
N'ezie ezi post! Social mgbasa ozi nwere ike ịbụ otu obere ukwuu ma mgbe m na-ahụ mkpụrụ obi iru na ha na-akụ n'ime a chọọchị na ndị ezinụlọ ha na-eje ozi na chọọchị na ha obodo na ezinụlọ.. Nke ahụ bụ ihe ịtụnanya na m.
Keinya • October 18, 2013 na 5:11 Abụ • zaghachi
Chaị. Nke a n'ezie gwa m, m na-ekele ya. Ọ na-ọma articulated na nwere ụfọdụ oké ndụmọdụ na ụzọ iji na-egosipụta. Daalụ!
Marjorie • October 21, 2013 na 7:15 pm • zaghachi
Daalụ maka ikenye a! M nnọọ obi ụtọ na Chineke mere ka m gị blog taa n'ihi na m maa mkpa iji na-agụ nke a!
Jerdon • October 31, 2013 na 2:03 pm • zaghachi
M n'anya na-abịa nke a blog na-agụ ndị a niile dị egwu posts site Njem na nwunye ya. Na-elu na-arụ ọrụ ọma unu abụọ!!! Chukwu gozie.
pelumi • November 3, 2013 na 9:47 pm • zaghachi
a dị nnọọ nyere m ọzọ ghọta na i chere na i nwere
Njem na ezinụlọ ya dị ọcha ngọzi.
TheMesenger • November 8, 2013 na 8:54 Abụ • zaghachi
Ahụ na-eme mgbe ụfọdụ ọ bụghị ya ????
TheMesenger • November 8, 2013 na 8:51 Abụ • zaghachi
Nke ahụ bụ sooooo ezi o nwere ike na-ewe oge efep chi nwekwara ị gaghị yiri ka nwere oge 4 ya anyị ga-bipu ya ka oge
Kaiser • November 17, 2013 na 12:05 Abụ • zaghachi
egwu na-agụ. N'eziokwu, i na-emefu oge dị ukwuu na-achọ na mara mma ụmụ okoro na mara ihe na ịlụ ejide elu a nile nke elu ọnụ ihe na Tumblr na i na-asọ Chineke onwe. ọ bụ ihe dị mwute, mwute; i nwere ike na-agụ na ya na okwu ya na-etinye oge na Ya….ekele maka anya opener!
Charity • December 28, 2013 na 5:57 pm • zaghachi
Chaị. Echere m na m na-eme ihe ọma n'ihi na m bụ nanị na abụọ ahụ a kpara. Nke a maa nyeere m elele onwe m. M chere na n'ihi na m na-adịghị eme emehie m dịkwa mma, na N'ezie e nwere mgbe ụlọ maka mmelite mma.
zochiere • January 30, 2014 na 10:29 Abụ • zaghachi
Chineke na-agọzi gị n'ihi na-ekere òkè nke a na-ekele gị! Nke a post dị nnọọ wee m na-eche banyere oge m na-ala n'iyi na-elekọta mmadụ media na ya na netwọk. O nyeworo m re-na-eche ihe m na-eme na oge.
ebere • February 17, 2014 na 3:56 pm • zaghachi
M na-ekweta na ọ bụla mgbe. M n'ezie na e ezere instagram n'ihi na m chọpụtara na m atụnyere m onwe ụmụ agbọghọ ndị ọzọ na e. Ọ bụ adịghị mma na-eche na-enweghị ekele. Na-amasị m na-achọ na cute anụmanụ. akpa ọchị
M na-ewere ihichapụ m fb, instagram akụkọ ọtụtụ ugboro. M na-eche na ọ bụ ihe ọma n'ihi ịnọgide na ndị òtù ezinụlọ dị anya doo. :)
home ndozi • March 5, 2017 na 3:30 Abụ • zaghachi
magburu onwe blog! Ì nwere Atụmatụ na mma maka ịchọ dere?
M na-eme atụmatụ na-amalite m website anya ma m a obere furu efu na ihe niile.
Ị ga-amam malite na a free n'elu ikpo okwu dị ka WordPress ma ọ bụ na-aga n'ihi a na-akwụ ụgwọ nhọrọ? E nwere ọtụtụ nhọrọ si n'ebe na m kpam kpam ọnụ ..
ihe ọ bụla echiche? Daalụ!